Taliyaha Xoogga, Gen Cirfiid Oo Qarka U Saaran Inuu Iscasilo, Ogoow Sababta,? – Hornafrik Media Network
Taliyaha Xoogga, Gen Cirfiid Oo Qarka U Saaran Inuu Iscasilo, Ogoow Sababta,?
By HornAfrik	 Last updated Sep 24, 2017
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Gen Cirfiid ayaa qarka u saaran inuu iscasilo, kadib markii cadaadis Gudaha iyo Dibadda ka soo wajahay.
Gen Cirfiid oo waqti kooban haya Xilkan ayaa cadaadis ka soo wajahay Xukuumadda, Taliska Maraykanka ee AFRICOM iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia. kuwaas oo mid kastaa dhinacooda Dano u gaar ah ku cadaadisay Taliyaha, balse markii ay suuragali waayeen ay u soo jeesteen inay ka shaqeeyaan Curyaaminta Taliska Xoogga Dalka Soomaaliya.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia ayaa ka dalbaday Taliyaha Xoogga inuu Gobalka Shabeelaha Hoose ka soo saaro Ciidanka Guuto 3-aad, isla markaana Taliyayaashooda Maxkamad lala tiigsado, balse Taliyaha waxa uu sheegay in Ciidanka halkaasi jooga ay yihiin Ciidan Qaran, Dambi lagu hayana aysan jirin, ciddii cadaymo haysana ay Dacwo keento, taasoo ku abuurtay Xildhibaanaddii u tagay oo u badnaa Hal Beel inay ka caroodaan Taliyaha.
Maraykanka oo Mushaaraadka siiya Ciidanka Xoogga ayaa lagu qanciyay inay Mushaarka ka jaraan Ciidanka Guuto 3aad, iyadoo loo maray Saraakiil iyo Masuuliyiin Dowladeed oo uu ka mid yahay Wasiirka Gaashaandhiga, kadibna waxaa la diyaariyay Qoraalo Been Abuur ah oo lagu eedeeynayo Gen Goobaale oo mar hore dhintay. Waxayna taasi keentay in Qoraaladooda meel la isaga tuuro.
iyadoo ay taagan tahay arrinta Guuto 3aad ayeey Saraakiil Maraykanka iyo Soomaali ah isla qorsheeyeen Labo Howlgal oo aan lala socodsiin Taliyaha, kuwaasoo ka kala dhacay Jubooyinka iyo Shabeelaha Hoose, Labadana lagu laayay Dad Shacab ah. Waxayna taasi keentay inay cambaarayn xooggan lagala kulmo Howlgaladaasi oo kii ugu dambeeyay Deegaanka Bariire lagu laayay in ka badan 10 Qof oo Beeraleey ah, Kadibna Gen Cirfiid waxa uu Warbaahinta u sheegay in Howlgalka Bariire uu ahaa Qalad dhacay, laguna laayay Dad Shacab ah, taasoo ka hor imaanysay Sheegashidii Wasiiro ka tirsan Xukuumadda oo Dadka la laayay ku sheegay Alshbaab.
Dhacada Bariire kadib Maraykanku waxay cadaadis saareen Taliyaha Xoogga, waxay ka dalbadeen Gaariga uu ku socdo oo ah Nooca aysan Xabaddu karin oo ay iyagu siiyeen inuu u soo celiyo, taasoo uu Taliyuhu ka diiday, Waxay sidoo kale ka jirteen Ciidamadda ku kala sugan Shabeelaha Hoose Mushaaraadkii, iyagoo sidoo kalana dib uga soo baxay Deegaanka Bariire oo ay joogeen Ciidamo Maraykan iyo Soomaali ah.
Maraykanku waxay sidoo kale Ciidanka Danab ee ay ku tababaraan Balidoogle u sheegeen inaysan ka amar qaadan karin Taliyaha Xoogga, taasoo ka dhigan inuusan wax awood ku lahayn Howlgaladooda oo ay go’aansanayaan Maraykanku halka ay ku duulayaan Ciidankaasi. Waxay Sidoo kale Shaqadda ka soo eryeen Taliye Ku Xigeenkii Danab oo ay uga shakiyeen inuu ku xiran yahay Taliyaha Xoogga.
Xukuumadda Khayre ayaa iyana dhinaceeda ka goosatay Ciidanka Xoogga Miisaaniyaddii uu ku shaqayn lahaa, iyadoona Bankiga Dhexe lagu amray inay meel iska dhigaan Waraaqaha ay Miisaaniyadda ku dalbanayaan Taliska Xoogga. Waxaana hadda Ciidanku Xooggu uu qarka u saaran yahay inuu waayo xittaa Shidaalka Gaadiidka Dagaalka ee ay ku howlgalaan.
Madaxwayne Farmaajo oo Cabasho uu u geeyay Taliyaha Xoogga ayaa ku xiray inuu fursad siiyo inta uu ka soo laabanayo Raiisulwasaare Khayre, Balse Gen Cirfiid waxa uu hadda qorshaynayaa inuu iscasilo.
Wasiirka Gaashaandhiga ayaa u ololaynaya in Taliyaha Xoogga laga dhigo Duuliye C/wali Jaamac Gorod oo ahaa Gaashaanle Sare oo ka tirsanaa Taliska Ciidanka Cirka oo ka mida Talisyadda hoos tagga Ciidanka Xoogga. sidoo kale Agaasimaha Nabadsugidda, C/laahi Sanbaloolshe ayaa ololahan qayb ka ah, taasoo hadii ay suuragasho ka dhigan inay meesha ka baxday hadal hayntii ahayd in Nabadsugidda Soomaaliya loo dhiibo, Gen Khaliif Axmad Ereg.
Gaawirada AMISOM oo qof shacab ah ku jiiray deegaanka Calamada.
Akhriso Warmurtiyeedka Shirka Madasha Dastuurka ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
Taliye Cusub Oo Loo Magacaabay Ciidanka Xoogga, Waa Kuma Taliyahaas,? – Hornafrik Media Network 3 years ago
[…] HornAfrik waxay 24 September qortay Warbixin ku saabsan in Gen Cirfiid uu qarka u saaran yahay inuu … […]